I-China Ulwazi Olujwayelekile Lwamafektri nabahlinzeki | Tanso
Imininingwane Ejwayelekile Yesikulufa
Njengamanje, izinto ezisetshenziselwa isikulufa eChina ziyinsimbi ezingama-45, i-40Cr, insimbi eyenziwe ngezinsimbi, i-38CrMoAl, i-alloy lokushisa eliphakeme, njll.
1) Cha. Insimbi engu-45 ishibhile futhi inomsebenzi omuhle wokucubungula, kepha ukumelana kwayo, ukumelana nokugqwala kanye nokuguga akulungile.
Ukwelashwa okushisa: Iqothulwe futhi yavutha i-hb220-270, imvamisa ephezulu yokuqothula i-hrc45-48.
2) Umsebenzi we-40Cr ungcono kunowensimbi engama-45, kepha imvamisa kufanele ifakwe ungqimba lwe-chromium ukuze ithuthukise amandla ayo okubumbeka nokugqwala. Kepha isidingo se-chromium plating ungqimba siphezulu, ungqimba lwe-plating luncane kakhulu futhi kulula ukulugqoka, lukhulu kakhulu, kulula ukuwa, kepha ngemuva kokuwa, kusheshisa ukugqwala, okungasetshenziswa kancane.
Ukwelashwa kokushisa: i-hb220-270 efudumele, i-HRC yensimbi enzima
I-3) I-Nitriding iron ne-38CrMoAl inemisebenzi emihle kakhulu futhi isetshenziswa kabanzi. Ngokuvamile, ungqimba we-nitriding ngu-0,4-0.6mm. Kepha lolu hlobo lwedatha lungamelana nokugqwala kwe-hydrogen chloride enamandla aphansi nentengo ephezulu.
4) idatha ye-superalloy iphakeme kunenye idatha. Imininingwane ayidingi ukugcotshwa. Iningi lazo lisetshenziswa kuhlu olungenalutho lwe-halogen-free somshini wokubumba umjovo. Imininingwane inezinto eziphakeme zokulwa ne-oxidation, anti-corrosion kanye nokulwa nokuguga, kanye nokwelashwa okushisa hra55`60.
Isithako sokulimala sisebenza ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme, ingcindezi ephezulu, i-torque ephezulu yokusebenza kanye nendawo ephezulu yokufudumala isikhathi eside. Izinto ezimbalwa zokuqala zidingwa yizimo zenqubo, futhi ukulahlekelwa ngenxa yokufutheka akunakugwenywa. Ngokuvamile, isikulufa siye safakwa-nitrided ukuthuthukisa ubulukhuni bengaphezulu, okungukuthi, ukwenza ngcono ukumelana kokuqina. Kodwa-ke, uma imbangela yokugqoka inganakwa, uma ukugqoka kungancishisiwe ngangokunokwenzeka, impilo yokusebenza yesikali izoncishiswa kakhulu.
Lokhu okulandelayo kuchaza izimbangela zokugqokwa kwesaka nezindlela zokunciphisa ukugqokwa
1. Ipulasitiki ngayinye inesilinganiso sokushisa sokwenza iplasitiki yokufakelwa. Ukushisa kokuphanda umphongolo kufanele kulawulwe ukuze kusondele kuleli zinga lokushisa. Upulasitiki obumbekile ungena emgqonyeni wokudla usuka e-hopper, futhi uzoqala ufinyelele engxenyeni yokuphakelwa, ezokhombisa ukungqubuzana okomile nakanjani. Lapho la mapulasitiki eswele ukushisa futhi ukuncibilika kungalingani, kulula ukwakha udonga lwangaphakathi lomgqomo nokugqokwa kwangaphandle kwesikulufa. Ngokufanayo, engxenyeni eqinisayo nasengxenyeni ye-homogenizing, uma isimo sokuncibilika sepulasitiki sidilizwa, kuzokwakha nokugqwala okuthe xaxa.
2. Ijubane kufanele lishintshwe kahle. Ngoba amanye amapulasitiki afakwa nama-ejenti wokuqinisa, anjenge-fiberglass, amaminerali noma ezinye izihlungi. Ukufutheka kwalezi zinto zokwenziwa kwensimbi eluhlaza izinto ezivame ukuvama kukhulu kakhulu kunolo lwamapulasitiki ancibilikisiwe. Ngomjovo walezi zipulasitiki, uma kusetshenziswa isivinini esikhulu, ukuthuthukiswa kwamandla e-shear kupulasitiki kuzophinde kuqinise imicu ehlukaniswe ngokwengeziwe. Imicu ehlukaniswe kabusha inemiphetho ebukhali futhi igqoke okunamandla okungeziwe. Lapho amaminerali wezinto ezingaphili egobhoza ngesivinini esikhulu phezu kwensimbi, umphumela wawo wokukhafula awuba mncane. Ngakho-ke, ijubane akufanele lishintshe kakhulu.
Isikhathi sokuthumela: Jun-03-2020